गण्डकीमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री नेपाली को हुन् ? – Bikash Khabar
गण्डकीमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री नेपाली को हुन् ?
बिहिबार, ०२ बैशाख २०७८ गते २०:०४ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	285 Views
काठमाडौँ, २ वैशाख। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । माओवादीले पनि औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने भएपछि १ वैशाख मध्यराति नै अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो ।
तर, बुधबार कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर अविश्वासको दर्ता गराएका छन् । संसद्मा यी तीन दलको हिस्सा ३० सिट हुन आउँछ । जसमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार गठनका लागि ३० सिट भए बहुमत पुग्छ । तर, गुरुङविरुद्ध यी तीन दल एक ठाउँमा उभिए ३१ सिट पुग्छ ।
को हुन् भावी मुख्यमन्त्रीका उम्मेद्वार नेपाली ?
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा मुख्यमन्त्रीको भावी उम्मेदवारमा प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । थरले पोखरेल भए पनि उनी थरको सट्टा नेपाली लेख्ने गर्छन् ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ । एमालेबाहेकका कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपा मिलेपछि गण्डकीमा सरकार फेरिने लगभग निश्चित भएको छ ।
नेपाली २००६ सालमा तनहुँ ९हालको व्यास नगरपालिका ११० पोखरेल फाँटमा जन्मिएका थिए । कांग्रेस तनहुँका संस्थापक नेता गोवद्र्धन पोखरेल तथा द्रौपदा पोखरेलका छोरा हुन् । प्रवासमा लामो समय बसेका उनका बाबुको सर्वस्वहरण भएको थियो । राजनीतिक परिवारमा जन्मिएका नेपाली भद्र, शिष्ट र मिलनसार नेताको रुपमा परिचित छन् ।
नेपाली प्रदेशसभामा नवलपरासी–१ को ‘क’बाट निर्वाचित भएका थिए । नेपालीले माओवादी केन्द्रका सूर्य न्यौपानेलाई पराजित गरेका थिए ।
चार भाइमध्ये नेपाली माइलो हुन् । उनका दाई रामचन्द्र पोखरेल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्य सचिव भएका थिए । रामचन्द्र पोखरेल संविधान सभा सदस्यसमेत हुन् । यस्तै साईँलो भाई डा जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् भने कान्छो भाई सुवासचन्द्र पोखरेल अमेरिकामा बस्छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाको सहमतिमा नेपाली गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता बनाइएका थिए ।
उहाँको वारेमा विस्तृत अध्ययन बिकास खबरको जीवन यात्रामा हेर्न सक्नुहुनेछ ।
सङ्क्रमितका लागि हेल्लो डाक्टर सेवा, भाइबरमा यो नम्बरबाट परामर्श लिन सकिनेे
काठमान्डाैं / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एफएनसीसीआई अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियानको थालनी गरेको छ । महासङ्घले यस अभियानअन्तर्गत पहिलो